Ọ bụ Ursula von der Leyen (onye isi oche EU n'ọdịnihu) bụ otu ụdị ọbara ahụ dịka ezinụlọ ndị eze Britain? : Martin Vrijland
Ọ bụ Ursula von der Leyen (onye isi oche EU n'ọdịnihu) bụ otu ụdị ọbara ahụ dịka ezinụlọ ndị eze Britain?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 July 2019	• 20 Comments
Ma eleghị anya, ị maara amara aha Winston Churchill: "Onye mmeri dere akụkọ ihe mere eme." Ka anyị mee ụfọdụ genealogical nnyocha na ọhụrụ EU president Ursula von der Leyen; ị maara na onye a na-ahọpụta onye a na-ahọpụta onwe ya na onye ọchịchị na-enyefe ya na mberede ka o weghara ebe a chọrọ site na Frans Timmermans. O yiri ka o nweghị ihe ndabara na Ursula von der Leyen ga-abụ onyeisi oche nke EU. E nwere ihe ịrịba ama ndị nwere ike igosi na o sitere na ọbara ọbara dị mma Von Saksen-Coburg na Gotha; otu ụdị ọbara ahụ dị ka nke ezinụlọ ndị Britain.
Ụlọ Saxony-Coburg na Gotha (Saxony-Coburg-Gotha) bụ usoro ndị eze German nke ndị òtù ha na-achị mba dị iche iche dị na Europe. Ulo eze sitere na ulo ducal nke Saxony-Coburg-Saalfeld (site na ulo Wettin), nke natara ndi mmadu abua nke Saxony-Coburg na Gotha na 1826. Na XNUM-X narị afọ, ụmụ sitere n'ọgbọ a nyere mba dị iche iche. Na 19, Eze George V gbanwere aha ndị eze Britain na Windsor. N'ihi nke a, ndị Briten echefuwo na ezinụlọ ndị Germany na-achịkwa ha na nzuzo (dịka Netherlands). O yiri ka EU ugbu a dị n'aka n'aka otu ọbaraline ahụ dị mma.
Site n'ụzọ, Achọrọ m mesie ya ike na isiokwu a na-egosipụta nkwenye, n'ihi na iwu Churchill na-emetụta Google. Anyị agakwaghị aga ụlọ akwụkwọ ọhụụ iji lee akwụkwọ akụkọ akwụkwọ akụkọ ochie ma ọ bụ akwụkwọ, ma Google bụ isi iyi nke ozi niile. N'ọnọdụ ọ bụla, enwere m olileanya ịmalite ịmalite ihe gbasara edemede a iji chọkwuo nchọpụta banyere nwanyị a ma ama bụ onye aha ya bụ Albrecht (lee aha nna ya). Ikekwe nke ahụ bụ otú nkume ala si abịa n'elu ma ọ bụ na ọ na-apụta na echiche m ezighi ezi:
Ursula von der Leyen a na-akpọ Ursula Albrecht ma sitere n'aka usoro eze eze ochie (ụda ọbara)
Ihe anyị nwere ike ịchọta site n'aka Google bụ na Ursula bụ nwa Ernst Carl Julius Albrecht. Ka anyị lelee ezinụlọ a dum. M na-enye gị ndụmọdụ ka ị wee pịa njikọ iji lelee pedigree niile.
Ernst Carl bụ nwa Friedrich Carl Albrecht, a mụrụ ya March 28 1902. Nke a bụ nwa nwoke nwoke ọzọ George Alexander Albrecht en Mary Ladson Albrecht (ịlụ di na nwunye na otu ọbara na-adịkarị na ụwa nke eze, nke dị mma, nke dị na Pharaonic). George Alexander Albrecht bụ nwa nwoke George Alex. Albrecht en Luise Albrecht (ọ na-anọgide na-agụ Albrecht). Alex Albrecht bụ nwa van Karl Franz Georg von Knoop en Kath. Albrecht (Egwu), aha dị ịrịba ama maka nna ahụ, n'ihi na Karl Franz Georg von Knoop bụ nwa nwa Albrecht (ya mere nna nna ya nwere ike ịgbanwe aha ya). Nna ya bụ Karl Franz Georg von Knoop na nna ya bụ Franz August Heinrich von Knoop. Nna ya mesịrị bụrụ Albrecht ọzọ, ya bụ Johann Friedrich Albrecht.
Ọ bụrụ na anyị na-amụ ọbara ọbara na weebụsaịtị Geni.com, anyị na-ahụ na Von Knoop bụ otu aha ezinụlọ Albrecht. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ Von Knoop ma mgbe ụfọdụ Albrecht. Ezinụlọ ahụ yiri ka ọ bụ "ọbara eze" ma na-eburu kpakpando Devid na ọdụm na ndakpọ ezinụlọ. Otu ọdụm ahụ anyị maara site na oranges.
Site na aha Albrecht anyị na - ejikarị aha Saksen-Coburg na Gotha, nke a na - ahụ na weebụsaịtị 4crests.com. Nke a bụ nkọwa site na weebụsaịtị ahụ:
Akwukwo Igbo, German, French Catalan, Italian, Spanish na Hungarian bu aha sitere na onye German aha ya bu ALBRECHET, bu nke ADAL (noble) na BERHT (nke di nma ma ama). Nke a bụ otu n'ime ndị Germany ndị a na - asụkarị, ndị isi na ndị isi ụka, dịka St. Albert nke Prague (aha Czech aha Vojtech, aha Latin bụ Adalbertus), onye isi Bohemia bụ onye nwụrụ martyr na 997 na-anwa ime ka ndị Prussia ghọọ ndị Kristian; St Albert Great (? 1193-1280) ọkà mmụta okpukpe Aristotelian na onye nkụzi nke Thomas Aquinas; na Albert the Bear (1100-70) Margrave nke Brandenburg. Imirikiti aha aha ndị Europe na mba ndị dị ka England, Scotland na France nọ na narị afọ nke iri na atọ na nke iri na anọ. Usoro amalitela na mbụ ma nọgidere n'ebe ụfọdụ n'ime narị afọ 19th, ma ụkpụrụ bụ na na narị afọ nke iri na nke iri na otu, ndị mmadụ enweghi aha nnabata, ma na narị afọ nke iri na ise ọtụtụ n'ime ndị bi na ya enwetawo aha nke abụọ.
E nwere ọtụtụ ndị a ma ama aha ahụ gụnyere Albert I (1255-1308) onye bụ eze Germany, nwa Rudolph m ma ọ bụ Habsburg. A hoputara ya eze Germany na-emegide Adolf nke Nassau, bụ onye o meriri wee gbuo ya na Gollheim (1298). O siri ike weghachite ike nke eze na belata nke ndi isi ochichi, ma egburu ya mgbe ya na nwa nwanne ya John batara gafee Osimiri Reuss. Albert, Prince Consort na Queen Victoria (1819-61) a mụrụ na Rosenaux Castle, dị nso na Coburg. Ọ bụ nwa nke Duke nke Saxe-Coburg-Gotha. Na 1840, ọ lụrụ nwa nwanne nne ya, Queen Victoria, alụmdi na nwunye nke ghọrọ ihe egwuregwu ịhụnanya zuru ụwa ọnụ. E nyere ya aha nke Consort Consist na 1857. N'ọlụlụ ha nile ọ bụ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, odeakwụkwọ nzuzo nke Queen. Ikwenyeghị ndị Minista na nhụsianya ọha na eze n'ihi njikọ German ya, na-ejedebe mmetụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, ọ bụ ezie na ndụmọdụ ya na-abụkarị ihe ziri ezi ma dị anya. Ọ nwụrụ ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ na 1861, na-enwe ogologo oge ma ọ bụ na nzuzo site na ya di ya nwụrụ. Emere Ememe Ncheta na Kensington Gardens na ebe nchekwa ya na 1871.
Ursula von der Leyen bụ n'ezie n'ezie Albrecht; ọbara ya bụ Albrechet, nke na-anọchite anya ADAL (onye a ma ama) na BERHT (na-enwu gbaa ma ma ama). A na-etinye nne mama Ursula na 'nzuzo' site na geni.com, ma nyere akụkọ ntolite nke Albrecht (mgbe ụfọdụ) Von Knoop, anyị nwere ike iche na nke a bụ Albrecht ma ọ bụ Von Knoop (otu na otu ọbara) ) bụ. Akụkọ ihe mere eme dum na-agba akaebe na 'na-agba n'ime ezinụlọ' (ma ọ bụ 'na-egosi'). Na mgbakwunye, ọ dịghị ihe kpatara Ursula kwesịrị iji na-akpọ Von der Leyen aha ya, n'ihi na papa ya bụ Albrecht nke ọma. Ursula agbanweela aha nna ya.
Site na nkọwa nke weebụsaịtị 4crests.com anyị nwere ike ịhụ nke ọma na ezinụlọ Albrecht nwere ike jikọta ya na ezinụlọ ndị eze Britain, site na alụmdi na nwunye n'etiti John Albert (onye Albrecht nwanne ya - na-etinye uche na uche - Albert m gburu) na Queen Victoria. Nke a John Albert bụ nwa nke onye mọnk nke Saxe-Coburg-Gotha ebe si otú a sitere na ezinụlọ a na-akpọ Albrechet. Albrechet ma ọ bụ Albrecht bụ otu ezinụlọ dị ka Von Saksen-Coburg na Gotha. Ya mere, Ursula yiri ka ọ bụ otu ọbara dị ka ezinụlọ ndị Britain! Abụọ ọbara sitere na Saxon Coburg na Gotha ebe na ya mere na nzuzo Albrecht's.
Ọ bụrụ na ị na-ele anya n'ọhụụ nke Ursula, ọ ga-abụ n'ezie nwa nwanyị nke Queen Elizabeth ugbu a. N'ezie, anyị agaghị ekwu okwu, mana o doro anya na o si n'ọbara ọbara ọbara Albrecht (Albrechet - nakwa Von Knoop). Anyị na-eche na EU bụ onye kwuo uche ma ọ bụ na Brexit ga-eduga na ọnwụ nke EU. Ee, ọ bụ ọdịdị nke ochichi onye kwuo uche ya na egwuregwu nke ịkọwa ihe na ọgba aghara, nke ọbara ọbara ndị dị mma enwewo ihe ịga nke ọma n'ịmepụta iwu kemgbe oge ha. Nwanyị eze na-abịa n'ocheeze na Brussels ma aha ya bụ Ursula si na Albrechet / Albrecht: Ursula Albrecht.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: wikipedia.orggeni.com 4crests.com
Nsonaazụ nchịkọta Dutch na ọnwa 4 site n'aka nri gaa n'aka ekpe gaa Timmermans? Ndị omempụ Ndị aghụghọ!
Donald Trump na Hillary Clinton na ụmụ abụọ ndị Phara?
Ndi ndi mmadu bu ndi ozo ma obu nani EU?
Tags: mba, mara mma, ụmụ, Obere, Achịcha, ọbara ọbara, ọbara ọbara, British, Frans, agbụrụ, geni, Gaa, eze nwanyi, ezinụlọ eze, Saxe-Coburg-Gotha, pedigree, Timmermans, Ursula von der Leyen, Victoria, Von Saksen-Coburg, Windsor
4 July 2019 na 13: 33
Akwụkwọ na-adọrọ mmasị bụ Semi-Gotha bụ maka ndị ezinụlọ a ma ama. Ọ bụghị naanị gothic ka ị ga-esi nweta ya. A na-eji aha ụgha eme ihe site na mmalite iji zoo ezigbo ihe si n'aka ndị nkịtị.
4 July 2019 na 14: 28
Nke ahụ bụ "M si na German German" dị oke nso 😀, ma ọ bụ n'ezie enweghị nkwekọrịta na gị votu ọnụ. Ha ka nwere ọdọ mmiri n'akụkụ nke ọzọ nke ọdọ mmiri maka ịkụ azụ? Ihe ndi mmadu na-agbaso ndi mmadu bu eziokwu, oge iji malite ime ...
4 July 2019 na 15: 56
Nnukwu ụgbọ elu na-aga England, ebee ka anyị hụrụ nke ahụ tupu ..
Ernst Albrecht nna Ursula - mgbe ahụ Prime Minista nke Lower Saxony, na otu n'ime ndị iro ndị iro - zigara London bụ agadi 19, ebe ọ na-amụ na LSE n'okpuru aha ụgha Rose Ladson na nchedo site na Scotland Yard.
Ọ họọrọ aha nna ya bụ Ladson n'ihi na ọ bụ aha nne nne nne ya si South Carolina, US, mgbe a họọrọ Rose n'ihi na e nyere ya aha ahụ bụ Roschen dịka nwatakịrị.
4 July 2019 na 15: 30
A Europe nke Hitler enweghi ihe ịga nke ọma, ma ha mesịrị nweta ụzọ ha.
7 July 2019 na 11: 32
Maka ihe ndekọ ahụ, ọ bụghị ndị Germany nwere ọbara German na-arụ ọrụ na Europe. Eziokwu ahụ bụ na ha nwere aha 'German' bụ n'ihi na ha biri na Germany ruo ogologo oge, ha ejiriwo aha German 'ka ha wee ghara ịpụ n'etiti ndị nkịtị Germany. Ụzọ dị ọcha.
Amalek dere, sị:
13 October 2019 na 00: 27
Aha Albrecht na-echetara m Albright dị ka na (((Madeleine Albright))
4 July 2019 na 17: 18
Na wikipedia m na-agụ na ọ lụrụ di von Le Leyen, nke na-akọwa aha nna.
4 July 2019 na 18: 58
Ee, ziri ezi, ma ọtụtụ oge ị na - ekwupụta aha nna gị mgbe nwoke ahụ gụchara aha ya. Na agbanyeghị na mmalite ya bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a, m na-ahụ na aha Albrecht dịkarịa ala na German Wikipedia.
4 July 2019 na 19: 51
O doro anya na ihe di egwu nke kwadoro ihe anyi ma ama; otu ezinụlọ ole na ole na-achị anyị (ndị na-adịghị ka ihe ha na-atụ aro) enweghi anya maka ọdịmma nke ndị mmadụ, ma ha na-eche banyere ọnọdụ na ike ha. (ma na-agafe ozu)
4 July 2019 na 22: 10
Ezigbo ezinụlọ mepere anya na Windsor, ọ dịghị ihe ọjọọ ọ bụla na ya. Nigel Farage na-enyo enyo dị ka Edward VIII, ma nke ahụ ga-abụ ihe kwekọrọ na ya, ọ bụghị iji kọwaa Romanov
4 July 2019 na 22: 11
4 July 2019 na 23: 32
Ekwela ka ndi mmadu nile di nkpa na ha nile bu ndi ezinulo na ndi otu anya
5 July 2019 na 13: 18
Ọ na-enwe mmasị ịbịa kọfị na ndị neos ..
5 July 2019 na 12: 02
N'otu oge, e nwere Albrecht ọzọ ... na-enye echiche na Albrecht adịghị mma ma dị nma na ihe?
ndị na-emegide RAF
5 July 2019 na 13: 13
Lee onye si GDR, ezinụlọ dị anya?
Albrecht sitere n'aka Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet. Ụfọdụ Monate nach seiner Ausbildung zum Schlosser wee sucked maka Dauer des Zweiten Weltkriegs zur Luftwaffe der Wehrmacht.
7 July 2019 na 22: 37
Albrechtjes nwere ọgaranya n'akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị na ha niile metụtara, ọ bụghị naanị eziokwu
5 July 2019 na 20: 38
Goetia bụkwa akwụkwọ nke a pụrụ ịkpọ ndị mmụọ ọjọọ. Solomon gaara etinye usoro a n'akwụkwọ a, ga-ejide ma wepụta ndị mmụọ ọjọọ. Ya mere demonology n'eziokwu. John Dee bụ onye ndụmọdụ nye English Queen Elizabeth I na 16 narị afọ ma na-etinyekwa aka na ya. Ọ bụkwa onye nledo n'elu nke ndị eze Bekee. Dị oke mkpa maka ikike Hen na njikwa, ya mere ha na-anwa ịchọta enyemaka na ndị mmụọ ọjọọ.
Ọ bụ ihe nwute na ha anaghị eche banyere ihe ọma. Ha bụ ndị na-atụ egwu ọnwụ. Ọfọn, ọ bụrụ na ị na-achịkwa ihe niile, ịchọrọ ịpụpụ ọnwụ. Ma ọ dị mwute ikwu na ha nwekwara maka onye ọ bụla.
7 July 2019 na 12: 42
EU na-enweta ihe kwesiri ya, na ihe ọ bụla mmadụ na-arụ ọrụ nke ọma, ndị dị ka nke a na-egbochi ha ma ọ bụrụ na m ga-eme ma ọ bụ katọọ ikpe-azụ (Von der Leyen) maka nrụrụ aka (Lagarde) ọ bụrụ na ohere nke ọrụ m dịtụ ntakịrị, ọ gwụla ma ị bụ onye ọkwọ ụgbọala dị elu nke EU, mgbe ahụ ndị a bụ ikike ndị ị họọrọ. Dị ka Juncker, EU na-asụgharị ma na-awagharị na abyss.
aurora0026 dere, sị:
9 July 2019 na 00: 05
Aldi ụlọ ahịa na-anọchite anya Albrecht Diskont ma tọrọ ntọala site na Theo Albrecht na Kar Albrecht. Albrechts nke Aldi bụ otu n'ime ezinụlọ ndị kasị baa ọgaranya na Germany.
16 July 2019 na 13: 52
O yiri ka a họpụtara Von der Leyen iji nyochaa ma kwalite mgbanwe NATO na ndị agha Europe. O nwere ike na-eme ihe na ọkwa ya dị ka Bundesministerin der Verteidigung ..
" Kedu ka ndị mmadụ nwere ike isi kwuo banyere 'mmata' na n'otu oge ahụ iji nyere aka na-elekọta usoro ahụ?
Ndi otutu mmadu ndi gbara gi gburugburu n'ebughi nkpuru obi (ndi adighi anu aru)? »
Nleta nile: 15.844.123